Art is My Life: စက်ရပ်သတင်း
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:03 PM
သနားပါတယ်။ ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်. ဓါတ်လိုက်တော့ မှာဘဲ။ ဘဲဥ လေးမှ မရှိ.။
နေဦး...ဘာစားချင်လဲ..ပြော..attachment နဲ့ပို့ပေးမယ်... တကယ်
မိုးရွာကြီးထဲ ချဉ်ပေါင်တန်ခိုးပြသော် မည်သို့လုပ်ပါမည်နည်း..
အိမ်သာကို အိမ်တွင်းတွင်ဆောက်ထားသော် တော်သေးဧ။်
ချဉ်ပေါင်းဟင်း ချက်ထားတာ ဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲ.
မှိုတက်နေသလားလို့ ဖြူဖြူကြီးနဲ့း)
wow!!! Wifi is now available in YGN??
How you get it?? Where can subscribe?
May I know the total costs??
၀ါယာလက်ကော်နက်ရှင် မြန်မာပြည်မှာရပါတယ်။ ပိုက်ဆံကတော့ ဖရီး တပြားမှ မပေးရဘူး။ တကယ်ပြောတာပါ